Xulka qaranka Belgium oo si layaab leh ugu gudbay wareega xiga ee siddeeda kadib markii ay guul cajiib ah ka gaareen Japan – Gool FM
(Russia) 02 Luulyo 2018. Xulka qaranka Belgium ayaa gaaray wareega siddeed dhamaadka koobka adduunka 2018 kadib markii ay ka gudbeen dhigooda Japan.
Kulanka ayaa ku bilaawday qaab waali ah, iyadoo labada dhinac ay si xoogan isku weerareen, xulka qaranka Japan ayaa ka yaabsaday kulankan dhigiisa Belgium oo la filayay inuu qaadan doono kulan sahlan.
Kulanka ayaa qeybtiisa hore ay ku kala nasteen labada xul Japan iyo Belgium barbaro 0-0.
Qeybtii dambe marka dib leysugu soo laabtay ayay sheeko halkeeda kasii socotay waxayna labada dhinac sameeyeen weeraro gaadmo ah.
Xulka qaranka Japan ayaa ku hormaray goolka waxaana u dhaliyay daqiiqadii 48-aad ee qeybtii labaad ciyaarta waxaana dhaliyay Genki Haraguchi oo caawin ka helay saaxiibkiis Gaku Shibasaki, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0.
Markale daqiiqadii 52-aad Japan ayaa dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta kadib markii uu u dhaliyay Takashi Inui oo isna caawinta goolkan ka helay Shinji Kagawa.
Xulka qaranka Belgium ayay sheeko ku cuslaatay kadib markii si layaab leh ciyaarta looga hogaamiyay 2-0.
Laakiin daqiiqadii 69-aad difaaca Jan Vertonghen ayaa xulka qaranka Belgium neefta kusoo celiyay kadib markii uu ciyaarta ka dhigay 2-1.
Xulka qaranka Belgium ayaa goolka kadib waxay bilaaween weeraro joogta ah si ay u keenaan goolka barbaraha.
Balse Marouane Fellaini oo ciyaa badal kusoo galay ayaa dhaliyay goolka barbaraha daqiiqadii 74-aad wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2, kadib markii uu goolkan ka caawiyay xidiga kooxda Chelsea Eden Hazard.
Layaab daqiiqadii 90-aad Nacer Chadli ayaa niyad jabiyay xulka qaranka Japan kadib markii uu ka dhaliyay goolka guusha wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-2 uu ku hogaaminayo Belgium.
ciyaarta ayaa waqtigii loogu tala galay kusoo idlaatay 3-2 ay guusha ku raacday xulka qaranka Belgium oo u gudbay wareega xiga ee siddeed dhamaadka koobka aduunka 2018.